Samsunda Acı Kaza Balık Tutmaya Giderken Trenin Altında Kaldı - RayHaber
[12 / 10 / 2019] ကော်မရှင်မှချမှတ်ထားသောSAMULAŞသို့အပိုဆောင်း 20 Million TL Capital တိုးမြှင့်ခြင်း	55 Samsun
[12 / 10 / 2019] Amasya Nostalgic Tram စီမံကိန်းအတွက် Accelerated အလုပ်	05 Amasya
[12 / 10 / 2019] Başkentrayလိုင်းစီမံကိန်းတိုးချဲ့ခြင်း	06 တူရကီ
Homeရထားလမ်းခရီးဝေးရထားစနစ်များနာကျင်မှု Giderken Samsun ၌ရှိ၏ရထားမတော်တဆငါးဖမ်းလက်အောက်တွင်တည်နေ
28 / 09 / 2015 Levent Ozen ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ 0
Samsun နာကျင်မှု Giderken ဖြစ်ခဲ့သည်ရထားမတော်တဆငါးဖမ်းလက်အောက်တွင်ညျနကွေ: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး Samsun အတွက်ငါးဖမ်းသွားရထားလမ်းရထားအောက်မှာတည်းခိုနေဖြင့်မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးဖြတ်သန်းသွားသည်။
အဆိုပါမတော်တဆမှုနိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာနယူးခရိုင်Atatürk Boulevard Interchange ပြည်နယ်၏ Canik ခရိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Yuksel မီးဘေး (57) hit angling သွားရထားလမ်းရှောက်သွားသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Samsun ရထားဘူတာ Veysel Özkara loaded ကျောက်မီးသွေးရထားကနေစက်လုပ်သမား Gelemen သွားသောရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်။ ရထားမီးအောက်မှာကျန်ရှိ Yuksel, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ စက်လုပ်သမား Veysel Özkaraစကားရပ်ယူခံရဖို့မြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းစတင်ပြေးလွှားနေဖြင့်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့သညျ။
တစ်ဦးသူသခှေဲစိတျခွငျးအဘို့အ Yuksel Ates အသုဘ Samsun ရဲဌာနရာဇဝတ်မှုရှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲအသင်းများကို Samsun သင်တန်းနှင့်သုတေသနဆေးရုံပြန်လည်သုံးသပ်သည့် morgue မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ရထားအောက်မှာခံစားနေရပြီးကျန်ရှိသမင်၏နောက်ဆုံး 16 / 01 / 2014 ရထားအောက်မှာခံစားနေရပြီးကျန်ရှိသမင်၏နောက်ဆုံး: အဆိုပါရထားမတော်တဆမှုမြောက်ပိုင်းဆွီဒင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နီးပါးတစ်သတ်ဘို့ရာထားသောတိရစ္ဆာန်၏ဆင်တူခဲ့သည်။ reindeer ပါမြောက်ပိုင်းဥရောပတှငျနထေိုငျနှငျ့အုပျစုထဲမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့, ကြမ်းတမ်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများ၏လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရထားနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခံရမလွတ်နိုင်ဘူး။ 50 သင်ဘရိတ်ကိုနှိပ်ခြင်းရှိမရှိနီးပါးရိုက်ချိုးအားလုံးခြားနားချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ reindeer ပါတက်တိုးတက်အကြောင်းကို Lapland အတွက်ခရီးသွားတစ်ဦးကခရီးသည်တင်မီးရထား။ ထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်သူတို့ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အတွက်ခရီးသည်bakılmayacakအမြင်များပေးသောဒါမကောင်းတဲ့တစ်ဦးသေသတ်ခြင်းငှါတိရစ္ဆာန်၏နီးပါးဆင်တူဟုဆိုသည်။ နော်ဝေမီးရထားဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Fredrik Rodendahl နှင့် reindeer ပါကြောင်း၏အသေခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလာဘ် ...
Konya NCC ကျောင်းသားများကိုအတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု Giderken Can (ဗီဒီယို) Going ကျောင်းတွင်ရှိကြ၏ 01 / 02 / 2013 အသိပညာကျောင်း Giderken ရယူ Konya အတွက်ဓါတ်ရထားမတော်တဆမှု Konya အတွက် Selcuk တက္ကသိုလ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် Alaeddin Keykubat ကျောင်းပရဝုဏ်လမ်းရထားစုစုပေါင်း 23 25 ကျောင်းသားများကိုဒဏ်ရာရရှိသည်ခရီးသည်တင်ဗင်၏ကျမ်းပိုဒ်များအတွက်တန်းဖြတ်မှာတိုက်မိနိုင်သလား။ ဒဏ်ရာရကျောင်းသားများကိုသူတို့စာမေးပွဲဖြေဆိုသှားဖို့ထွက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိခဲ့၏။ 08.45 Alaeddin Keykubat ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲမှာ Selcuk တက္ကသိုလ်မှမတော်တဆယနေ့အဆင့်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည် Alaeddin- ကျောင်းဝင်းအချိန်စွပ်စွဲထိန်းအကွပ်မဲ့ရွှေ့ပြောင်းအောင်အပေါ်အဆင့်ကူးမှာ Hasan Yilmaz ကိုစီမံခန့်ခွဲ 23 M က 51 ပန်းကန်မီနီဘတ်စ်, ၏ 42 နှစ်အတွင်း 8204 ခရီးသည်ခုနှစ်တွင်, ဒါပေမယ့်ခရီးသည် motorman 30 နှစ်အရွယ်အလီလမ်းရထားTokgözတိုက်မိမရှိကြပေ။ 15 အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမီနီဘတ်စ်နှင့်အတူဓါတ်ရထားတိုက်မှု ...
ငါထဖမ်းရန်ကြိုးစားနေရထားအောက်မှ နေ. 05 / 01 / 2014 ရထားဖမ်းရန်ကြိုးစားပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျန်ရစ်: ကုိုကြည့် Manisa ခြေလျင်ခရီးသည်တံခါးကိုသူကိုအောက်တွင်ရှိနေဆဲဟာဆိုးရွားရထားထဲမှာပျောက်ပျက်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက် 22.00 အဖြစ် Manisa အတွက်ရထားဘူတာမှာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Izmir နှင့် Konya သည့်အပြာရောင်ရထားတစ်စီးသူကို 31135 လေ့လာရေးခရီး, Manisa မီးရထားဘူတာများတွင်ခရီးသည်တက်ကောက်ဖို့မှတ်တိုင်များနှင့်အတူ။ ဤအတောအတွင်းလေ (69) ရက်နေ့တွင်ရဖို့ခရီးသည်မထွက်ထံမှဂိဒေါင်ယုံ, ရထားမှအပြေးအလွှားအားဖြင့်သူသည်ရထားစီးချင်ခဲ့တယ်ရွှေ့ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ရထားဟာခြေလျင်လည်းပါဝင်သည် assign အဆိုပါသံလမ်းပေါ်သို့ပြုတ်ကျမှုကြောင့်အအေးဆုံးတံခါးပိတ်ပစ်ရန်ချိန်ခွင်လျှာဆုံးရှုံးsıkışıncaတံခါးဝ၌သင်၏ခြေကိုရွှေ့, ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။ ခရီးသည်နှင့်ဒေသခံများ၏ status ...
ပေါင်မုန့်ကိုနေအိမ် (ဗီဒီယို) လက်အောက်တွင်တည်နေမှရထားယူပြီးခဲ့သည် 06 / 08 / 2014 ရထားအောက်၌လက်ဝဲယူဘို့ပင်မစာမျက်နှာပေါင်မုန်: လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်ထိန်းအကွပ်မဲ့အဆင့်ကိုဖြတ်မှာကလေးများအရှိန်ခရီးသည်တင်မီးရထား၏Süleyman Eken ထိတ်လန့်ရလဒ်ကသူတို့အသက်ဆုံးရှုံး 41 Konya အတွက်အလုပ်သွားပါ, သူ့စက်ဘီး2နှစ်ပေါင်းအပေါ်အိမ်သို့သွားလေ၏။ အိမ်မှာ Eken ယူရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ပေါင်မုန့်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းဝှေ့နေသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်, မနေ့ကညနပေိုငျး Meram ခရိုင်စင်တာများသဲ Yenice ခရိုင်လမ်းရှိရာအရပျကိုယူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ဖို့ထွက် set စက်မှု xnumx'inc Süleyman Eken ရှိစက်ရုံတရုံဖှဲ့စညျးလုပ်သားများ, ထို့နောက်မထွက်။ Eken သည့်ကိတ်မုန့်ဧရိယာ, 1 မီတာအင်ဂျင်နီယာ Mustafa ဆက်လက်လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့အဆင့်ကိုကူးဖို့အိမျကနေလမ်းဆင်းတဲ့စတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ် ...
İZBAN '' ပစ်မှတ်မက်ထရိုစံ
ပေါင်မုန့်ကိုနေအိမ် (ဗီဒီယို) လက်အောက်တွင်တည်နေမှရထားယူပြီးခဲ့သည်
ဂျာမဏီငယ်ရွယ် high-speed ကိုရထားအောက်မှ 15 နှစ်အရွယ်၌ နေ.
အီတလီမှာတော့ရထားအောက်မှာသူ selfie ကလေးက rails
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (209) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)